Mihantsy ny governemantan’izy ireo noho ny fandaharan’asa fanarahamaso ny orinasam-pifandraisandavitra ghaneana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Aogositra 2018 5:34 GMT
Tamin'ny volana Jolay, niantso ny Fitsarana misahana ny Zon'Olombelona ao Accra renivohitra ireo mpanao fangatahana (mpitory) roa, Sara Asafu-Adjaye sy Maximus Ametorgoh mba hihaino ny raharahan'izy ireo. Nilaza izy ireo fa mety hanohintohina ny zo fototra momba ny fiainana an-takonana (manokana) ny rafitra. Miasa amin'ny sehatra teknolojia sy ny haibika (fandravahana) izy roa ireo.
Tamin'ny volana jona 2018, nanamafy ny filazan'ireo mpitory ny Sampan'ny Fifandraisandavitra Ghaneana, nanazava fa ny Sehatra Iombonana dia “afaka mandrakitra, manaramaso sy mandrakitra amim-pahavitrihana na tsia ao amin'ny zotrampifandraisana elektronika mivoaka sy miditra, toy ny feo. “
Vondrona maro samihafa no nanohitra ny drafitra, anisan'izany ny Occupy Ghana sy ny Foiben'ny IMANI momba ny Politika sy ny Fanabeazana, izay naneho ahiahy eo amin'ny fiainana manokana (an-takonana) amin'ny drafitra, sy ny tombontsoan'ny governemanta sy ny mpiantsehatra hahazo tombontsoa avy amin'ny fifanarahana Kelni GVG. Nandrahona hitory ny governemanta sy ny orinasam-pifandraisana ihany koa ilay depiote Ras Mubarak raha tanterahina ny fifanarahana.
Ho fanohanana ny hevitra, namaly ny lahatsoratra Facebookn'i Ametorgoh i Don Derrick:
Tao amin'ny Facebook, Gyebiba Ebony nanangana fanontaniana momba ny atao hoe fanitsakitsahana ny tsiambaratelo amin'ny Common Platform (Sehatra Iombonana) ary nampitaha izany amin'ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo avy amin'ireo sehatra media sosialy sasany.
Ho setrin'izany, nanazava i Ametorgoh fa ny Common Platform dia hampifandray ny “vona rehetra amin'ny tambajotra fa tsy ny rafitra rosiam-bola ihany “:
Saingy nolavin'ny Fitsarana momba ny zon'olombelona ao Accra, Ghana ny fangatahana nasehon'i Asafu-Adjaye sy Ametorgoh.
Franklin Cudjoe, mpanohana lehibe ny fangatahan'i Asafu-Adjaye sy Ametorgoh ary ny tale mpanatanteraka ao amin'ny IMANI, nilaza fa niaiky ireo orinasam-pifandraisan-davitra fa ny Common Platform, raha ampiharina, dia mety hanitsakitsaka ny tsiambaratelon'ny mpanjifa ary tsy noraharahian'ny fitsarana ity porofo ity tamin'ny fanapaha-keviny.
Emmanuel Kyeremanteng Agyarko, mpikambana iray ao amin'ny parlemanta, nanamafy fa ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo mety ho ataon'ny sehatra dia tsy midika fa hanitsakitsaka ny tsiambaratelo, amin'ny fomba rehetra izy.
Toa hampiharina tsy misy firaharahiana ny fotoam-pitsarana farany ny Common Platform, satria nilaza ny fitsarana fa mety hiatrika fahavoazana tsy hita pesipesenina ny Fanjakana raha misy ny didy omena.